Indlu esandula ukulungiswa yasemaphandleni enomtsalane kunye neembono zolwandle - I-Airbnb
Indlu esandula ukulungiswa yasemaphandleni enomtsalane kunye neembono zolwandle
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguTrude
Wamkelekile kwi-«Gammelstua», indlu yelog enomtsalane ukusuka kwinkulungwane ye-19 enombono omhle wefjord! Indlu ibekwe kwindawo enoxolo kunye nelali kunye nomgama wokuhamba ukuya elwandle olulungele abantwana. Indlu ibuyiselwe ngothando kulo nyaka uphelileyo kwaye inepatio enelanga onayo.
Apha luhambo olufutshane lwemizuzu eli-10 ukuya zombini eKristiansund kunye neziko likamasipala. Indlela ebukekayo yeAtlantiki luhambo lwemizuzu engama-30 kuphela. Ummandla wasekhaya unamathuba amaninzi okuhamba intaba kuwo onke amanqanaba.
Iindonga zamaplanga eziqinileyo kunye neenkcukacha ezininzi zangaphambili zinika "iGammelstua" umoya ofudumele kunye nobumnandi. Ukuhlobisa kusikhumbuza ukutyelela umakhulu kwilizwe. IGammelstua inendawo yayo yokutyela ekhitshini, ngakwindawo yokuqala yomlilo endlwini. Kwigumbi lokuhlala, ikomityi elungileyo yekofu inokonwatyiswa ngombono wokungena eKristiansund ngefestile.
IAverøy yindawo emnandi yokufikela wena othanda ngaphandle, indalo kunye nembali. Kukho amathuba amaninzi amafutshane kunye nexesha elide lokuhamba kwindawo yendawo, kubandakanya ne-Stavneset lighthouse entle ngaphakathi komgama wokuhamba wendlu. IBremsneshatten yeyona ndawo oyithandayo yokunyuka intaba kwindawo ekufutshane, apha unokufumana indawo yokuhlala yeStone Age, umqolomba onomdla kunye nendawo yokukhwela elungelelanisiweyo. I-Averøya ikwanemyuziyam yelali entle, icawa yembali kunye nemizobo yamatye. Ukuba uyathanda ukuloba ngokuzonwabisa, iAverøy yindawo yakho. Iskimu sokhenketho "Stick Out" siyacetyiswa kushwankathelo lweendawo ezininzi zokukhwela intaba zaseNordmøre naseRomsdal. I-Trollstigen kunye neGeiranger zifikeleleka ngokulula njengohambo lwemini.
Umbuki zindwendwe ngu- Trude
Ababuki zindwendwe baya kufumaneka ngefowuni ukuba uncedo luyafuneka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Averøy